အိမ်များ အနုပညာအာရုံ - အိမ်နှင့်ဥယျာဉ်အတွက်စိတ်ကူးများ
လှပသောအိမ်များ။ ဥယျာဉ်များ၊ မုတ်များ၊ ရေကူးကန်များရှိသည့်တစ်ထပ်တိုက်အိမ်များစီမံကိန်းများ။ ထပ်ခိုးခန်းများ၊ အိပ်ခန်းသုံးခန်းပါသောအိမ်ငယ်များ၏ပုံများ။
တစ်ထပ်တိုက်အိမ်များ 2018 ၏ပြခန်း။ တစ်ထပ်အိမ်တစ်အိမ်အတွက်အကြံဥာဏ်များ။ ထပ်ခိုးနှစ်ထပ်နှင့်အထပ်နှစ်ထပ်ပါအိမ်တစ်လုံးအတွက်အကြံဥာဏ်များ။ တစ်ထပ်အိမ်စီမံကိန်းများ။ 2019 အိမ်စီမံကိန်းများ။ သေးငယ်တဲ့အိမ်၏ဒီဇိုင်း။
ဤတွင် ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သစ်သားအိမ်ပုံစံစီမံကိန်းကိုတင်ပြပါမည်
၁၀၀ မီတာခန့်ရှိသောအိပ်ခန်းသုံးခန်းပါ ၀ င်သောသစ်သားတစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးစီမံကိန်း
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2sq.m. အိပ်ခန်း 50 အိပ်ခန်းနှင့်အတူသေးငယ်တဲ့ခွက်အိမ်၏စီမံကိန်း
အိပ်ခန်း ၂ ခန်းပါသည့်ဘန်ဂလိုအိမ်ငယ်လေး၏ဤစီမံကိန်း
2sq.m. ထက်နည်းသောအိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါသောကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအိမ်၏စီမံကိန်း လူနေ.ရိယာ
အိပ်ခန်း ၂ ခန်းသို့မဟုတ်ဒီထက်နည်းသောကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအိမ်၏စီမံကိန်းကိုတင်ပြသည်
အိပ်ခန်း ၄ ခန်း၊ ကားဂိုဒေါင်နှင့်ထပ်ခိုးပါသောတစ်ထပ်အုတ်အိမ်တစ်လုံးစီမံကိန်း
အိပ်ခန်း ၄ ခန်းပါ ၀ င်သောအထပ်တစ်ထပ်အုတ်အိမ်တစ်လုံး၏ဤအံ့ဖွယ်စီမံကိန်း၊
အိပ်ခန်း ၂ ခန်းပါသောတစ်ထပ်ပါသစ်သားအိမ်၏ပုံစံပြုစီမံကိန်း
ဤသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောတစ်ထပ်အဆောက်အ ဦး သစ်သားအိမ်တစ်လုံး၏စတိုင်ကျသောစီမံကိန်းဖြစ်သည်
အိပ်ခန်း ၂ ခန်းပါသောလှပသောအိမ်တစ်လုံး၏ပြီးပြည့်စုံသောစီမံကိန်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်2နှင့်အတူလှပသောကျစ်လစ်သိပ်သည်းအိမ်၏ပြီးပြည့်စုံသောစီမံကိန်းကိုတင်ပြ
ထပ်ခိုး၊ ကားဂိုဒေါင်နှင့်စာရေးတံများစွာပါ ၀ င်သောဤအံ့ဖွယ်ကောင်းသောအိမ်
အိပ်ခန်း ၄ ခန်းပါသောကျဉ်းမြောင်းသောတစ်ထပ်အိမ်တစ်အိမ်စီမံကိန်း
1 မှ 13 စာမျက်နှာ1234510ရှေ့သို့»နောက်ဆုံး